7 mpanao sary malaza tokony ho fantatrao | Famoronana an-tserasera
mpanao sary malaza
Mary Rose | | mpanakanto
Ny fitadiavana references hita maso dia fananana miverimberina ho loharanon'ny aingam-panahy eo amin'ny mpanakanto, ny mpamorona ary ny mpanao sary. Eny, iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra amin'ny famoronana fomba famolavolana na hafa. Angamba tsy fantatrao ny maro amin'ny sehatry ny fanoharana, ka izany no antony hitondranay anao amin'izao fotoana izao ny andian-tsary malaza.
Holazainay aminao ny momba ny fiainany sy ny fomba fiainany. Ya en la tenaidad, estas ilNy ustradoras malaza dia nahavita ho reference eran-tany.Amin'izao fotoana izao dia ekena sy eken'ny rehetra ny asany, samy manana ny fombany manokana.
1 Vehivavy mpanao sary 7 malaza
1.7 Mpanoratra voanio
Vehivavy mpanao sary 7 malaza
Eto ambany eto dia milaza aminao momba ny mpanao sary malaza 7 izahay, izay nahazo loka nandritra ny asany matihanina ary niara-niasa tamin'ireo andrim-panjakana malaza eran-tany.
Loharano: Paula Bonet
Paula Bonet dia a Valencian mpanao sary, mpanao hosodoko ary mpanoratra, dia teraka tamin'ny 10 Desambra 1980. Mipetraka any Barcelona izy amin'izao fotoana izao. Nahazo diplaoma tao amin'ny Fine Arts tao amin'ny Polytechnic University of Valencia izy, ary manam-pahaizana manokana amin'ny hosodoko sy ny fanoratana. Tamin'ny 2002 dia nahazo ny vatsim-pianarana Promoe izy, izay nahavitany ny fianarany tao amin'ny Oniversite Katolika ao Santiago de Chile. Tamin'ny 2006 dia nahazo vatsim-pianarana hafa izy, izay nifindrany tany New York mba hianatra tao amin'ny NYU.
Tany am-piandohan'ny asany dia nanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny fandokoana menaka sy ny sokitra izy. Saingy tamin'ny 2009 dia nanapa-kevitra izy Ampifantoha amin'ny fanoharana ny asanao. Nanomboka tamin'io taona io, dia tonga lafatra ny teknika amin'ny fandokoana menaka sy ny sokitra. Tamin'ny taona 2018 no nahazoany ny Medaly of Cultural Merit (Fiavaka lehibe amin'ny Generalitat Valenciana). Manana izy niara-niasa amin'ny gazety toy ny El País, Diary Ara y eldiario.es.
Luci Gutierrez dia a Catalan mpanao sary, fantatra maneran-tany. Teraka tao Barcelona izy tamin'ny 1977. Ny ny fomba dia voadio sy maneso, maka ho fanondroana ny fifandraisana amin'ny fitiavana, ny famitahana ary ny fitondrantenan'olombelona. Nipoitra tamin'ny boky, sary mihetsika ary fanentanana dokambarotra, ho an'ny haino aman-jery samihafa sy any amin'ny firenena samihafa ihany koa ny zavakantony. Niasa tamin'ny gazety toa ny The New Yorker, The New York Times, The Washington Post ary The Wall Street Journal izy.
Anisan'ireo sanganasany fanta-daza indrindra dia hitantsika hoe «Tsy mora ny Anglisy», «Miss Galassia» na «La valigia delle carabattole».
Loharano: Eva Vazquez
Eva Vazquez dia a mpanao sary avy any Madrid. Nianatra maritrano sy sarimiaina izy ary tamin'ny voalohany dia toa nanana lalana samihafa, saingy tamin'ny farany dia nivory izy ireo ary nitarika azy ho ao anatin'ny tontolo iray izay ahitana andian-tantara sy famokarana sarimihetsika. Ny tetezany matanjaka dia ny ahafahany misintona ny tranobe rehetra azony an-tsaina, manomboka amin'ny tena zava-misy ka hatramin'ny tena mahafinaritra.
Vokatr'izany dia lasa iray amin'ireo mpanao sary manan-danja sy miavaka indrindra mifandray amin'ny tontolon'ny famoaham-boky eto amin'ny firenentsika izy. Miompana amin'ny fantasy sy fanoharana ny sanganasany, izay faritana amin'ny alalan'ny fitambaran'ny hevitra voarafitra araka ny famaritan'ny stilistika azy ny fampiharana ara-tsaina. Izy amin'izao fotoana izao dia natokana ho an'ny fanoharana amin'ny gazety, boky, gazety matihanina, sns.
Sara Fanelli (teraka 1969) dia a Mpanakanto britanika sady mpanao sary an-tsary teratany Italia, malaza indrindra amin'ny bokin'ny ankizy misy sary. Teraka sy lehibe tany Italia izy, tany Florence. Nianatra tao amin'ny Liceo Classico Michelangelo izy. Taty aoriana dia nifindra tany Londres izy mba hianatra ny famolavolana sary sy sary. Tamin'ny taona farany tao amin'ny Royal College of Art no nahitan'i Sara ny tontolon'ny fanoharana ho an'ny ankizy. Iray amin'ireo bokiny malaza indrindra ny Button. izay nahazoany ny loka Macmillan ho an'ny fanoharana an-tsary ho an'ny ankizy. Nanomboka teo dia namoaka boky efa ho 20 io mpanao sary britanika io.
Mikasika ny fomba fiasany sy ny teknikany dia mampiasa collage sy fampifangaroana fitaovana sy endritsoratra i Sara. Niara-niasa tamin'ny haino aman-jery manan-danja toy ny New York Times, The New Yorker, ary ny hafa toa an'i Pinguin, Faber sy Faber, Tate Britain, Tate Modern na ny Museum Victoria sy Albert izy.
Ana Juan (1961, Valencia) es una de Las ny ankamaroan'ny mpanao sary espaniola ekena iraisam-pirenena. Su kanto ha Sido -bahoakaado en Revist fro El Padia, El vavao, National Geographic Traveler, Elle, Mary mazava, The vaovao yorkers, Time, People o Herinandrom-baovao. Niara-niasa tamina gazety toy ny La Luna de Madrid sy Madriz, manome ny hany tantara an-tsary ho azy ireo hatramin'izao, amin'ny loko mainty sy fotsy ary expressionista avokoa.
Ana Juan ha Sido una de Las mpisava lalana amin’ny literatiora ho an’ny ankizy amin’ny teny katalianina, manana lohateny maherin’ny telopolo navoaka tamin’io fiteny io. Ha obizanylasa numerosos PremiOS fro ilUstasaankehitriny e fanavaozanaadankehitriny, entre otRosa nahazo ny pNational Award for Illustration, Ministeran'ny Kolontsaina Espaina tamin'ny 2010.
Loharano: Paula Troxler
Paula troxs es una mpanao sary sy mpamorona sary avy any Willisau (Soisa), dia teraka tamin'ny 1981. En ny asany dia manasongadina ny loko sy ny ankizy sy ny sary hosodoko. Su trabtongolo gasy se ha Expuesto en samihafaas Expositionbe dia be ao SuIza toy ny ao amin'ny extnihazakazakajero. Nianatra fifandraisana hita maso tao amin'ny University of Science Applied to Art and Design izy, izay hiafarany manokana amin'ny fanoharana. Tamin'ny 2006 dia nanapa-kevitra ny hanangana ny studio-ny manokana any Berlin izy, izay hanomboka ny asany amin'ny maha-mpanao sary an-tsary tsy miankina azy. Farany, tamin’ny 2008, dia nanapa-kevitra ny hifindra tany Zürich izy, izay misy azy sy miasa ankehitriny.
Es mpanao sary sy mpanao plastika. Teraka tao Quintanar del Rey (Cuenca) izy. Vao 14 taona monja ity mpanao sary ity dia nahafantatra fa te hianatra Fine Arts. Nahazo diplaoma tao amin'ny Fine Arts izy, saingy nanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny sary. Hatramin'ny farany dia nanapa-kevitra ny hanokan-tena tanteraka amin'ny fanaovana sary sy fanoharana izy. Ny aingam-panahiny dia omen'ny ahiahiny, ny fisaintsainany ary ny heviny. Izy io dia miresaka lohahevitra toy ny fitiavana, fiovan'ny toetr'andro, fitiavan-tena na fanantenana. Miara-miasa amin'ireo marika sy mpamoaka lahatsoratra toa an'i Grijalbo, Casio na Glamour Spain.
Raha heverinao fa tsy dia nahafantatra anao firy ity lahatsoratra ity. eto Avelako ho anao ny lisitry ny mpanao sary Espaniola hafa, izay mety tsy fantatrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » mpanao sary malaza
Inona no atao hoe CorelDraw